Soo dejisan eScan Internet Security Suite 14.0.1400.2228 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudeScan Internet Security Suite
Bogga rasmiga ah: eScan Internet Security Suite
eScan Security Security Suite – ilaalin dhamaystiran oo ka dhan ah fayraska, khariidadaha, boobka iyo hanjabaadaha shabakada. Noocaanku wuxuu u qaybsan yahay dhowr qalab oo ilaalin asaasiga ah, mid kastaa wuxuu mas’uul ka yahay ammaanka qaybaha nidaamyada qaarkood oo wuxuu bixiyaa tirakoob buuxa oo ku saabsan natiijooyinka baarista. eScan Security Security Suite waxay ka kooban tahay laba-habboon oo dusha sare leh oo si wax ku ool ah u xakameynaya weerarrada websaydhka iyo isku-dayga tijaabooyinka dekedda, iyo dhaqdhaqaaqa habka gaarka ah u ogeysiiyay isticmaalaha ku saabsan isku-dayyada aan la aqoon si loo galo shabakadda. Software wuxuu ka ilaaliyaa faylasha iyo faylasha ka soo horjeeda fayrasyada, iyo qaylo-dhaleecooyinka cudurka qaba ama ku dhajiyo karantiil. eScan Security Security Suite waxay bixisaa difaaca kombiyuuterka caqli-celin ah oo ka dhan ah hanjabaad cusub ama aan la aqoon, iyada oo ay ugu wacan tahay farsamooyinka daruuriga ah iyo algorithms-adag ee ogaanshaha hanjabaadda. Xakamaynta waalidnimo ee la dhisay ayaa xaddidaya helitaanka carruurta khayraadka internetka qaarkood oo leh waxyaabo lakiriiri karo. eScan Security Security Suite ayaa sidoo kale nadiifin kara kombiyuutarkaaga faylasha ku-meel-gaarka ah iyo faylasha, kaydka, taariikhda browser-ka, cookies iyo macluumaadka kale ee aan loo baahnayn.
Kormeeridda taraafikada shabakada
Soo dejisan eScan Internet Security Suite
Faallo ku saabsan eScan Internet Security Suite
eScan Internet Security Suite Xirfadaha la xiriira